पार्टी लामो समयपछि एकलय-एकतालमा « Janata Times
महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो । गलत व्याख्या गर्नु हुँदैन कि जस्तो लाग्छ । भीम रावलजीले मलाई चुनौती दिनुभएको छैन । तपाईंले उहाँका शब्दहरुप्रति ध्यान दिनुस् । मप्रति उहाँले आदर, सम्मान, माया, स्नेह देखाउनु भएको छ । अलि बढी खट्नु भएको छ, थकाई लाग्यो कि, आराम गर्ने हो कि भनेर । त्यसो भए म उठ्छु भनेर भन्नु भएको छ । होइन ? मैले पनि सुनेँ । उहाँले कुनै चुनौती भन्नु भएको छ ? उहाँले सुझाव दिनुभएको छ । उहाँको स्नेहपूर्ण सुझावबाट म प्रभावित छु । राम्रो हो । यो सुझाव एकखालका मान्छेहरुले निकै मन पराउने खालको पनि सुझाव हो । मैले अध्यक्ष नउठेर विश्राम लिए हुन्थ्यो भन्ने पार्टी बाहिरका केही मानिसहरुको पनि सुझाव छ । त्यस्तो देखिन्छ । तर, रावलजीको त्यो होइन । उहाँले मप्रति अत्यन्तै स्नेहभाव देखाउनु भएको छ ।
नेकपा (एमाले) लोकतान्त्रिक पार्टी हो । यसमा कुनै प्रकारको जोरजुलुम, करकाप वा दबाव हुँदैन । मेरो विरुद्धमा उठ्छु भन्छ कसैले, मैले उठ्ने, नउठ्ने टुंगो त गरेको छैन अहिले । मैले उठ्ने टुंगो गरेँ भने, मलाई निर्विरोध छोड्न पनि पाइन्छ । मलाई चुनौती दिन पनि पाइन्छ । मलाई कसैले चुनौती दिएमा त्यसलाई मैले स्वागत गर्छु । त्यसप्रति कुनै नराम्रो मान्नु हुँदैन र निर्विरोध हुन पाएको भए वा ! क्या एमाले निर्विरोध भयो अध्यक्ष भन्ने हुने, चुनौती भयो भने भएन भन्ने, त्यस्तो केही पनि हुँदैन । लोकतन्त्रमा चुनौती स्वाभाविक कुरा हो । स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्छ । र, म यदि उठ्ने भएँ भने मैले कसैलाई नउठे हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्दैन । म एउटा अध्यक्षको पदमा भएको मान्छेले तपाईं नउठ्दिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा सामान्य शब्दमा पनि आग्रह गर्दा दवाब पर्न सक्छ । दवाब दिने कुनै मेरो मनशाय छैन, हुँदैन । त्यसकारण म कसैलाई पनि अलिकति दवाव महशुस हुने खालको कुनै व्यवहार, अभिव्यक्ति केही पनि गर्दिनँ । त्यसकारण मैले उठ्ने, नउठ्ने अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । उठ्ने भएँ भने अरुलाई नउठ्न पनि भन्दिनँ ।
नेकपा (एमाले) विभाजनपछि पनि पहिलो पार्टी छ । प्रतिपक्षमा रहेको बेला महाधिवेशन गर्दै छ । यो महाधिवेशनले चितवनबाट देश र जनतालाई दिने सन्देश के हो ?
माधबकुमार नेपाललाई तपाईंले नबोलानुको कारण के हो ? निम्ता नदिनुको कारण के हो ?
अर्को चाहिँ, माधबकुमार नेपाल लगायतलाई पार्टीको रुपमा निम्ता गर्न मिलेन । पार्टीको रुपमा निम्ता गर्न किन मिलेन भने २५ गते हाम्रो पार्टीले अनुशासनहीन क्रियाकलाप, पार्टी विरोधी क्रियाकलाप, विपक्षीसँग साँठगाँठ गरेर आफ्नो सरकार ढाल्ने र विपक्षीको सरकार बनाउने खालका लोकतन्त्रमा नसुहाउने, पार्टी विरोधी र प्रकारान्तरले देशको अहितमा काम गरेको हुनाले साउन २५ गते कारबाही गरेर निष्काशन गरिएको थियो । त्यो कुरा भदौ १ गते संसद सचिवालयमा जानकारी दिइएको थियो । निर्वाचन आयोगलाई पनि त्यसै दिन जानकारी गराइएको छ । तर पर्खिपर्खिकन निष्काशन गरेका व्यक्तिहरुलाई लिएर चलिरहेको संसद बन्द गरेर मध्यरातमा संसद बन्द गर्ने,भोलिपल्ट बिहान २० प्रतिशतको अध्यादेश ल्याउने काम भयो ।
अध्यादेशमा ४० प्रतिशत राख्दा अघिल्लो सरकारको चर्को विरोध गरिएको थियो । त्यो चर्कोविरोध २० प्रतिशत वा राखेर गर्दा गरिएन । पहिले अदालतले खारेज गरेको थियो । चलिरहेको संसदलाई १२ बजे राति अन्त्य गरेर अनि बिहान जारी गर्ने कुरा असंसदीय र छलपूर्ण थियो । यी सबै कुराले नेकपा (एमाले ) का विरुद्ध असंवैधानिक, गैरकानूनी, षड्यन्त्रपूर्ण अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप भएको थियो । पार्टी फुटाउने चेष्टा भएको थियो । त्यसकारण माधब नेपाललाई र माधब नेपालले नेतृत्व गरेको, निष्काशित गरेका व्यक्तिहरुको गुटलाई नेकपा(एमाले)ले पार्टी भनेर मान्न सक्ने स्थिति रहेन । पार्टी नै होइन भने पार्टी भनेर निम्ता गर्ने कुरा भएन ।
कम्युनिष्टबीच एकताका कुरा जुन छ, कम्युनिष्टहरु एकताबद्ध छन् । बाँकी रहेकालाई एकताबद्ध बनाउँछु । जो कम्युनिष्टका नाममा, कम्युनिष्टको बर्को ओडेका, रामनामी ओडेका,माला पनि जप्दै गरेका तर आँखा चाहिँ अन्तअन्ततिर लगाइ राखेकालाई चाहिँ एकता गर्दिनँ ।
अर्को प्रश्न छ, हामीहरु पार्टीमा बस्नुभन्दा पहिले को पूर्व माओवादी थियो ? को पूर्व के थियो ?भन्ने कुरा होला । को हिजो कहाँनिर थियो एउटा कुरा होला । एक ठाउँमा भएपछि हामी फेरि एक ठाउँमा छौं । त्यसकारण यो पक्षको व्यवस्थापन, त्यो पक्षको व्यवस्थापन भन्ने कुरा छैन, हुँदैन । हाम्रो काम नेताहरुको व्यवस्थापनमा अल्झिने होइन,हाम्रो काम देशका जनताका समस्याहरुको समाधान गर्ने, त्यसका निम्ति ध्यान दिने, त्यसका निम्ति अल्झिने हो ।
अब कुन नेताको व्यवस्थापन के ?अहिलेको व्यवस्थापन भनेको चुनाव लडेर भोट ल्याउनु पर्छ । जुन पदमा भोट ल्याएर जित्छ त्यहीँ हो व्यवस्थापन । ल्याएर जितेन भने नो व्यवस्थापन । त्यसकारण यो पक्षको व्यवस्थापन, उ पक्षको व्यवस्थापन गर्न थाल्यो भने त्यही पार्टीभित्र पक्ष–विपक्षको निरन्तरता अथवा नया ँसिर्जना यस्ता खालका अभ्यासहरु हामी गर्दैनौं । पार्टी एउटा छ, एउटा पार्टी, एउटा नेतृत्व । एउटा केन्द्रीय कमिटी हुन्छ । एउटा स्थायी कमिटी हुन्छ । एउटा सचिवालय हुन्छ । पदाधिकारीहरुको समूह एउटा हुन्छ । यसको पक्षबाट यतिजना, यसको पक्षबाट यतिजना गरेर सचिवालय पनि बन्दैन । स्थायी कमिटी पनि बन्दैन, केन्द्रीय कमिटी पनिबन्दैन । यसको पक्षबाट यतिजना, यसको पक्षबाट यतिजना भयो भने त्यो सधैँ पक्ष भइरहने भयो नि । पार्टी एकजुट त कहिल्यै पनि नहुने भयो । हाम्रो चाहना होइन, जनताको पनि चाहना त्यो होइन । त्यसकारण हाम्रोमा त्यस्तो कुराहरु छैन । हाम्रोमा नेताहरुको व्यवस्थापन मुख्य कुरा होइन र प्रवृत्तिहरु, पक्षहरु कायम राख्ने कुरा होइन । हामी अन्तरघुलित भएर एउटा पार्टी, एउटा संगठनको रुपमा आबद्ध भएर अगाडि बढ्छौं ।
हरेक निकायका आफ्ना सीमाहरु हुन्छन् । हरेक निकाय आफ्ना ती सीमाहरु भित्र बसुन् । हामीले लोकतन्त्रका लागि लडेको यसैका लागि हो । यहीँ मान्यता हाम्रो रहेको छ । तर, नेपालमा फैसला संविधानमा नभएको, संविधानमा लेखिएकोभन्दा विपरित हुन गर्यो । सरकार हेरफेर गर्ने, गठन गर्ने थलो संसद हो । संसदले सरकार गठन गर्छ वा हेरफेर गर्छ । प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्छ र हटाउनका लागि पनि संसदले सिफारिस गर्छ । आपूmले निर्णय गरेर त्यो निर्णय सिफारिस गर्छ र राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री हटाइने वा नियुक्त हुने कुरा हुन्छ ।
यहाँ प्रधानमन्त्री हटाइएको संसदले थाहा पाएन । प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री हटाएको थाहा पाएन । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्था र त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री परमादेशबाट हटाइयो । अर्को प्रधानमन्त्री पनि संसदले थाहा नपाइकन निर्वाचित गर्नुपर्ने थलोले, जनताको प्रतिनिधि थलोले, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलोले प्रधानमन्त्री कसलाई नियुक्त गरियो भन्ने पनि थाहा पाएन । र, प्रधानमन्त्री नियुक्त भयो । मैले अस्ति पनि एक ठाउँमा बोलेको थिएँ, विश्वासको मत लिनका लागि संसद बोलाइयो र विश्वासको मत मागियो । किन मागियो विश्वासको मत ? के आवश्यक भयो विश्वासको मत ? जब संसद प्रधानमन्त्री बनाउने, फेर्ने थलोलाई थाहा नभइकन सरकार परिवर्तन हुन्छ, प्रधानमन्त्री फेरिन्छ, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति परमादेशबाट अदालतबाटै हुन्छ । यति बजेसम्ममा, भोलि यति बजे भित्र नियुक्ति दिनू, यति बजेभित्र सपथ गराउनू भनिन्छ । सपथ ग्रहणको समय पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तोक्नेसम्मको भएपछि यो बडा विचित्रको भयो ।
सबैभन्दा बढी भोट पाएको, सबैभन्दा बढी सिट पाएको वहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई अब निर्वाचनमा, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा हाललाई यसमा भाग लिन नपाउने, सहभागी हुन नपाउने ? जनताले सबैभन्दा ठूलो पार्टी, सबैभन्दा बढी मत, सबैभन्दा बढी सिट दिएर पठाएका छन् । जो सिटिङ प्राइमिनिस्टर छ, उ चाहिँ उम्मेदवार नै हुन नपाउने जस्तो फैसला ! यो न संविधानको अक्षरसँग मिल्छ, न भावनासँग मिल्छ, न लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मिल्छ, न दुनियाँको विश्वको कतैको नजिरसँग मिल्छ वा अभ्याससँग मिल्छ । त्यस्तो कुरा पनि भयो । हामीले त्यो कुरा संविधानसम्मत र न्यायोचित भएन भन्यौं । तर, अदालतको मर्यादाका लागि, अदालतको सम्मानका लागि हामीले त्यसलाई मान्यौं, कार्यान्वयन गर्यौं । किन यस्तो भएछ ? वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरु भन्नथाल्नु भयो, वारले भन्नथाल्यो, सर्वोच्च अदालतका श्रीमान् न्यायाधीशजीहरुले भन्नथाल्नु भयो । सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरुका भाषण यहाँहरुले सुनिरहनु भएको होला । भ्रष्टाचारका कुरा, लेनदेनका कुरा यहाँहरुले नै सार्वजनिक गरेका कुराहरु छन् । मन्त्रीमा बार्गेनिङ भयो, लेनदेनभयो भनेर…. ।
(सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राख्नुभएका विचारको सम्पादित अंश ।)